कस्ता मोबाइल साउन १ गतेदेखि चल्दैनन् ? हेर्नुहाेस् प्राधिकरणको सूचना - bampijhyala.com
Home > सूचना प्रविधी > कस्ता मोबाइल साउन १ गतेदेखि चल्दैनन् ? हेर्नुहाेस् प्राधिकरणको सूचना
कस्ता मोबाइल साउन १ गतेदेखि चल्दैनन् ? हेर्नुहाेस् प्राधिकरणको सूचना
२७ असार २०७८, आईतवार ०७:२७ bampijhyala
२७ असार, बाँपीझ्याला, काठमाण्डौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम लागु गर्ने तयारी गरेको छ । त्यसको लागि तीव्रताको साथ काम अघि बढेको जनाएको छ । प्राधिकरणले बिहीबार एक सूचना प्रकाशित गर्दै व्यावसायिक हिसाबले नियमानुसार आयात भई नेपालमा नै खरिद भई प्रयोगमा रहेका मोबाइल सेटका ग्राहकले हाल पुनः आईएमईआई दर्ता गर्नु नपर्ने जनाएको छ ।
यस्तै, व्यक्तिगत तवरले विदेशबाट आयात भई प्रयोग भइरहेका सेटको हकमा ग्राहकको दूरसञ्चार सेवा अवरुद्ध नहुने गरी व्यवस्था मिलाइने जनाइएको छ ।
“व्यक्तिगत तवरले विदेशबाट आयात भई प्रयोग भइरहेका सेटको हकमा ग्राहकको दूरसञ्चार सेवा अवरुद्ध नहुने गरी व्यवस्था मिलाइने र अवरूद्ध आईएमईआई दर्ता प्रणाली सुचारू भएपछि थप उचित समय प्रदान गरी आईएमईआई दर्ता गर्ने प्रबन्ध मिलाइने,” सूचनामा भनिएको छ ।
नेपालमा मोबाइल सेट खरिद गर्दा नियमानुसार आयात भई प्राधिकरणमा आईएमईआई दर्ता भएका मोबाइल सेट खरिद गर्न पनि अनुरोध गरिएको छ ।
पेट्रोलियम पाइपलाइन सञ्चालनमा आएपछि निगमको ४ अर्ब जोगियो
काँग्रेस महाधिवेशन : समूहगत व्यवस्थापनमा सकस
१ श्रावण २०७८, शुक्रबार २०:११ bampijhyala 0
बाँपीझ्याला, काठमाण्डौं । नेपाल टेलिकमले ग्राहकहरुको सुविधालाई ध्यानमा राखी...
१ श्रावण २०७८, शुक्रबार ०७:४९ bampijhyala 0
१ श्रावण, बाँपीझ्याला । आजदेखि सञ्चालनमा आउने मोबाइलको नेपाल...
३१ असार २०७८, बिहीबार १९:०४ bampijhyala 0
हाम्रो सर्भर ह्याक भएको छैन : नेपाल टेलिकम
बाँपीझ्याला, काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले आफ्नो सर्भरमा ह्याकर समूहद्वारा...
आज दोलखामा थप ३४ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि २७ असार २०७८, आईतवार ०७:२७
‘सम्झिनी पानी छम्किनी’ भिडियोमा दीपा र भुवनको रोमान्स २७ असार २०७८, आईतवार ०७:२७
लघुकथा–पढ्ने रहर २७ असार २०७८, आईतवार ०७:२७
पछिल्लो चरणमा कोभिड १९ को संक्रमण बढ्दो क्रममा रहेकाले सचेत रहन जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय दोलखाको अपिल २७ असार २०७८, आईतवार ०७:२७
सर्वोच्च अदालतले सरकारी सेवामा हुने आरक्षण जातीयताको आधारमा नभइ आवश्यकताको आधारमा गर्नुपर्ने फैसला २७ असार २०७८, आईतवार ०७:२७